Madaxda Madasha Badbaado Qaran oo yeeshay shirkoodii ugu horreeyay oo looga hadlay arrimaha doorashada – Kalfadhi
Madaxda Madasha Badbaado Qaran oo yeeshay shirkoodii ugu horreeyay oo looga hadlay arrimaha doorashada
March 24, 2021 Hassan Istiila
Madaxda Madasha Badbaado Qaran ayaa shalay yeeshay shirkoodii ugu horreeyay, kaas oo loogaga hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashada.
Guddoomiyaha Madasha Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dalka uu ku jiro dhib, isla markaanna la isku heysto sidii loo qaban lahaa doorasho loo dhan yahay, waxaana uu sheegay in Madasha loo dhisay sidii dalka looga bixin lahaa xaaladda muragsan ee uu ku jiro xiligaan.
Mudane Xaashi ayaa intaasi ku daray in dalka ay ka jirto xaalad amni xumo oo Madaxda dowladda degmada Afgooye aysan ku tegi karin gaari, isla markaana looga baahan yahay si looga baxo in heshiis laga gaaro khilaafka taagan.
Madashan ayaa waxaa ku mideysan maamulada Puntland iyo Jubaland, Midowga Musharixiinta iyo Golaha Siyaasiyiinta Somaliland ayaa waxaa Maanta Shirkii Koowaad uu ugu furmay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Dowladda oo soo bandhigtay qodobadii ay isku raaceen Guddigii Farsamada ee dowladda Federaalka iyo dowlad-goboleedyada